YOYARLAY - ﻿ဝီကီလိခ် တည်ထောင်သူ ပြည်နှင် ဒဏ်ပေးရေး မေ၃၀ ဆုံးဖြတ်မည် Login
ကိုယ်က သူ့ကိုချစ်သလို သူကလည်း ကိုယ့်ကိုချစ်ဖို့ပဲ အဓိကပါလို့ ဆိုတဲ့ အောင်ရဲလင်း
ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ကြီးအတွက် အောင်ရဲလင်း မျှော်မှန်း ထားတာ တွေများရှိမလား Read more...
မိုးဦးလေပြည်လား၊ မိုးသက်မုန်တိုင်းလား ကန်-မြန်မာ-တရုတ် နှောင်ကြိုးများ
အမေရိကန် သမ္မတနှင့် မြန်မာ သမ္မတတို့ တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာမီဒီယာ Read more...
ပေါင်ကြီးခြင်း၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး
ပေါင်တံ သွယ်သွယ်လေးနဲ့ စူပါ မော်ဒယ်လ် ခန္ဓာကိုယ် လေးတွေဟာ Read more...
ကိုယ်လှလား၊ မလှလားတော့ မသိပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားလုံးကြိုက်တယ် ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး
Q. ဘာကြောင့်အောင်မြင်လာ တယ်ထင်လဲ
A. သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ Read more...
ကျား၊ မ ၀ိရောဓိများ
ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေထက် ပိုပြီး သာတယ်၊ မိန်းမတွေဟာ Read more...
ဝက်ခြံပေါက်ရခြင်း အကြောင်းများနှင့် ဝက်ခြံပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်းများ
နေရောင် ကာကွယ်တဲ့ လိုးရှ...
ဘောင်းဘီအကြပ်က အောက်ပိုင်း သေစေနိုင်
ချက်ချင်းတော့ မသေပါဘူး။ အချိန်ကာလ တစ်ခုအထိပါ။ ဂျင်...
အလွမ်းပြေ အနမ်း၊ နှစ်ပတ်လည် သီချင်းများဖြင့် ပရိသတ...
AGD ဘဏ် ဖုန်းဖြင့် ၂၄ နာရီဝန်ဆောင်မှု ပေးမည်
အများပိုင် ဘဏ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ပြင်ဆင်နေသော အာရှ...
အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ရှိ တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား သားမယားပြုကျင့်
ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်၊ ရေကျော်ရပ်၊ မြောင်းကြီးလမ်း၊...
အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး သတင်းများ
You are here: ပင်မစာမျက်နှာ နိုင်ငံတကာ ဥရောပ ﻿ဝီကီလိခ် တည်ထောင်သူ ပြည်နှင် ဒဏ်ပေးရေး မေ၃၀ ဆုံးဖြတ်မည် ﻿ဝီကီလိခ် တည်ထောင်သူ ပြည်နှင် ဒဏ်ပေးရေး မေ၃၀ ဆုံးဖြတ်မည် 31 May 2012 |
By 7Day News လျှို့ဝှက် သတင်းများအား ဖော် ထုတ်လေ့ရှိသော ဝီကီလိခ်စ် ဝက်ဘ်ဆိုက် တည်ထောင်သူ ဂျူ လီယန် အက်ဆန်းအား ဗြိတိန်နိုင် ငံမှ ဆွီဒင်နိုင်ငံသို့ နှင်ထုတ်မည့် ကိစ္စကို ဗြိတိန် တရား ရုံးချုပ်က မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ် မည်ဖြစ်သည်။ ဂျူလီယန်အက်ဆန်းသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလအ တွင်း ဥရောပဖမ်းဝရမ်းဖြင့်ဗြိတိန် နိုင်ငံတွင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ခံရပြီး ၄င်းအား မုဒိမ်းမှု၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများနှင့် အလိုရှိနေသော ဆွီ ဒင်နိုင်ငံသို့ပေးပို့မည် မပို့မည်ဆို သည်ကိုဗြိတိန်အမြင့်ဆုံး တရားရုံး ကဆုံးဖြတ် မည်ဖြစ်သည်။
ဂျူလီယန်အက်ဆန်း(၃၀ နှစ်)သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရချိန်မှစ၍ ဥရောပရေးရာတိုက်ပွဲများ တစ် ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ အောက်တရားရုံးတစ်ရုံးမှ ချမှတ် ခဲ့သောဆုံးဖြတ်ချက်အား အထက် တရားရုံးတစ်ရုံးတွင် အယူခံဝင်ခဲ့ ပြီး ယခု နောက်ဆုံးဗြိတိန်တရား ရုံးချုပ်တွင် အယူခံဝင်ခြင်းဖြစ် သည်။ ဗြိတိန်တရားရုံးချုပ်က ၄င်း အမှုအား ထပ်မံပယ်ချခဲ့ပါက မစ္စတာအက်ဆန်းအနေဖြင့် ပြင် သစ်နိုင်ငံ စထရက်ဘော့ဂ်မြို့ရှိ ဂျူလီယန်အက်ဆန်း(၃၀ နှစ်)သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရချိန်မှစ၍ ဥရောပရေးရာတိုက်ပွဲများ တစ် ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။
အောက်တရားရုံးတစ်ရုံးမှ ချမှတ် ခဲ့သောဆုံးဖြတ်ချက်အား အထက် တရားရုံးတစ်ရုံးတွင် အယူခံဝင်ခဲ့ ပြီး ယခု နောက်ဆုံးဗြိတိန်တရား ရုံးချုပ်တွင် အယူခံဝင်ခြင်းဖြစ် သည်။ ဗြိတိန်တရားရုံးချုပ်က ၄င်း အမှုအား ထပ်မံပယ်ချခဲ့ပါက မစ္စတာအက်ဆန်းအနေဖြင့် ပြင် သစ်နိုင်ငံ စထရက်ဘော့ဂ်မြို့ရှိ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥရောပ တရားရုံးသို့ အယူခံဝင်နိုင်သေး ကြောင်းသိရသည်။ ၄င်း၏အမှုတွဲ မှာ နောက်ဆုံးတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသွားမည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း ဂျူလီယန် အက်ဆန်းကပြောကြားသည်။ အမေရိကန်တပ်သားဘရက် ဒလေမန်းနင်းမှာလည်း လျှို့ဝှက် စာရွက်စာတမ်းများအား ဝီကီ လိခ်စ်သို့ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် အမူရင်ဆိုင်နေရ သည်။